Interior designer Zahra Afridi (R) kicksapunching bag duringakickboxing training session at her home in Islamabad February 10, 2014. Afridi runs her own interior design company. Her most recent project wasaClassic Rock Coffee cafe in Islamabad. Thou
ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတချို့ ဖြစ်တဲ့ Punching bag, Wake up call နဲ့ On the chopping block နဲ့ တို့ကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။
(၁) Punching bag
Punching (လက်သီးနဲ့ထိုးတာ)၊ bag (အိတ်) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က လက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့အိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက လက်ဝှေ့လောကမှ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး လက်ဝှေ့သမားတွေ လက်ဝှေ့ထိုးလေ့ကျင့်တဲ့အိတ်ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်သားရေ ဒါမှမဟုတ် plastic အထူစားနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့အိတ်ရဲ့အထဲမှာတခုခု သွတ်ထားပြီး အပေါ်ကနေ အိတ်ကိုတွဲလောင်းချိတ်ဆွဲထားကာ လက်ဝှေ့ထိုးလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပဲ လက်သီးနဲ့ထိုးထိုး ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အိတ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကရှင်းပါတယ်။ ဝိုင်းအနိုင်ကျင့်ခံရတာ၊ ဒေါသထွက်တိုင်း အမဲခံရတာ၊ အဆူခံရတာ၊ အပြောခံရတဲ့လူမျိုးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို Donald Trump သမ္မတ မဖြစ်မီ သူ့ရှေ့ နေဖြစ်ခဲ့တဲ့ Michael Cohen ဟာ ထိုစဉ် Trump ရဲ့ လိင်အရှုပ်တော်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခု Cohen ဟာခုစုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက တချိန်ကဆိုရင် Trump အတွက်ဆို အသက်တောင် အသေခံမယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးသူလဲဖြစ်သလို၊ Trump ရဲ့ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်ခံရမှုကိုခံခဲ့ရသူလို့ ဆိုကြပါတယ်၊ ဒါကြောင့် သူ့ ဟာ Trump ရဲ့  Punching bag လို့ သတင်းတွေမှာရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Cohen ကပြောစရာရှိတာ ပြန်ပြောနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် The Washington Post သတင်းစာကြီးက Oncea'punching bag,' Cohen takesaswing at Trump - တချိန်က အသေအလဲ အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ Cohen ဟာ အခုတော့ Trump ကို ပြန်ချဖို့ ပြင်နေပြီဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
John resigned from his job because his boss used him asapunching bag.
John က အလုပ်ကနေ ထွက်လိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းက သူ့ဆရာသမားက သူ့ ကို အသေအလဲ အနိုင်ကျင့်လို့ ဖြစ်တယ်။
(၂) Wake up call
Wake up (အိပ်ရာကနေနှိုးတာ)၊ call (တယ်လီဖုန်းခေါ်တာ) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကအိပ်နေတာကိုနှိုးတဲ့တယ်လီဖုံးခေါ်သံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက ဟိုတယ်တွေမှာ တည်းခိုကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေက မနက်စောစော နှိုးစေချင်ရင် ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုကောင်တာက အမှုထမ်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ကိုယ့်အခန်းကို တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီး နှိုးပါဆိုတဲ့ မေတ္တာရပ်ခံတဲ့အလေ့ကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်နေတဲ့လူကို နိုးစေတဲ့ တယ်လီဖုံးခေါ်သံဖြစ်တဲ့အတိုင်း ၊ ဒီအသုံးရဲ့ Idiom်အဓိပ္ပါယ်ကအခြေအနေတခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်ထင်ထားသလို အဆင်မပြေဘဲ၊ တခုခုတော့ စိုးရိမ်စရာ၊ သတိထားစရာ ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို အသိတရား ရစေအောင် နှိုးဆော်ပေးတာ၊ သတိပေးရာရောက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တခုခုကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအသုံးကို တကမ္ဘာလုံး သုံးနေတဲ့ Facebook အနေနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ ဟာကွက်တွေ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရချိန်မှာ Facebook ရဲ့  Stock ဈေးကလည်း တရက်ထဲမှာပဲ စံချိန်ချိုး ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၀၀ ထိုးကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် The Washington Post သတင်းစာကြီးက Wake up call jolts Facebook sharesအသိတရား ရစေတဲ့အချက်ဟာ Facebook အစုရှယ်ရာကို ကိုင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီးနဲ့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Scientists say recent extreme weather conditions should serve asawake up call on climate change.
မကြာသေးမီကလွန်ကဲတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာဟာ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်လို့သတိပေးရာရောက်စေတယ်လို့ သိပံ္ပပညာရှင်တွေက ပြောကြတယ်။
(၃) On the chopping block
On (အပေါ်မှာ)၊ the chopping (ခုတ်တာ၊ထစ်တာ၊စင်းတာ)၊ block (သစ်တုံး) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ခုတ်ထစ်ရာမှာသုံးတဲ့ သစ်တုံးပေါ်မှာ ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာမှာတော့ Chopping block က စဉ်းတီတုံး ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းတီတုံးပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် ခုတ်ထစ်ခံရဖို့က သေချာသလောက် ဖြစ်နေသလို အီဒီယံသွယ်ဝိုက် အဓိပ္ပါယ်က ဖြတ်တောက်ခံရဖို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့စာရင်းထဲမှာ ပါနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းတော့ ဖြတ်တောက်ခံရဖို့ ရှေ့ ဆုံးမှာ ပါနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ကိုယ်လည်ပင်းအစင်းခံရမယ့် အခြေအနေမျိုးဆိုက်တာကိုလည်း ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတဟောင်း Barrack Obama လက်ထက်က အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ACA ခေါ် Affordable Care Act ဆိုတဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြုပြင်စောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတ Donald Trump က သူ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီး၊ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူတွေထံက အခွန်ငွေ ၂.၃ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံမှုကတော့လွှတ်တော်မှာ နှစ်ကြိမ် ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရပြီး၊ အခုတကြိမ်မှာတော့ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ The Washington Post သတင်းစာကြီးက ACA’s medical device tax once again on the chopping block လို့ ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
If we can’t findasolution, our necks will be on the chopping block.
ကျနော်တို့ ပြဿနာကို အဖြေ မရှာနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့လည်းပင်းတွေ အစင်းခံရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ idioms အသုံးတွေက Punching bag, Wake up call နဲ့ On the chopping block တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။